Maamulkii hore ee degmada Ufeyn Oo Xilka Wareejiyey • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Maamulkii hore ee degmada Ufeyn Oo Xilka Wareejiyey
Maamulkii hore ee degmada Ufeyn Oo Xilka Wareejiyey
Munaasabad xil wareejin ah ayaa saaka ka dhacdey degmada Ufeyn ee ka tirsan gobolka Bari,waxaana xilka wareejinaayay maamulkii hore ee degmada oo dhowaan Madaxweynaha Puntland xilka qaadis ku sameeyey isla markaana maamul cusub u magacaabay.
Guddomiyihi hore ee degmada Ufeyn Cabdulaahi Shire Jebiye ayaa ka hadlay munaasabada,wuxuuna ku dheeraaday waxyaabaha uu maamulkiisa qabtay ayadoo u sheegay xilliga loo magacaabayay xilkaas iyo xilligaan degmada uu isbedel weyn ka dhacay.
Wuxuuna sheegay inuu ku faraxsanyahay xilka qaadista lagu sameeyey isagoo soo dhoweeyey Guddomiyaha cusub oo u sheegay inuu la shaqayn doono.
Guddomiyaha cusub ee dhowaan la magacaabay Maxamuud Jaamac Aw Muuse ayaa isna halkaas kasoo jeediyey hadalo,wuxuuna u mahadceliyey Guddoomiyihi hore isagoo uga mahadceliyey waxqabadkiisa iyo qaabka uu xilwareejinta cusub.
Mudane Maxamuud waxaa u xusay inuu samayn doono waxqabad balaaran,waxaana uu ka codsaday shacabka iyo masuuliyinta Puntland in ay gacan siiyaan maamulkiisa.
Munaasabada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa Odeyaal,Waxgarad iyo Haween oo soo dhoweeyey xil wareejinta qaabka ay u dhacdey.
Tagged With: Ufeyn